I-Voucherify: Yethula Amaphromoshini Angokwezifiso Ngohlelo Lwamahhala Lwe-Voucherify | Martech Zone
I-Voucherify: Yethula Amaphromoshini Angokwezifiso Ngohlelo Lwamahhala lwe-Voucherify
NgeSonto, Novemba 7, 2021 NgeSonto, Novemba 7, 2021 Katarzyna Banasik
Qinisekisa iyisofthiwe yokuqala ye-API Yokuphromotha Nokuphathwa Kobuqotho esiza ukuqalisa, ukuphatha, nokulandelela imikhankaso yokuphromotha yomuntu siqu njengamakhuphoni esaphulelo, amaphromoshini azenzakalelayo, amakhadi esipho, ama-sweepstake, izinhlelo zokwethembeka, nezinhlelo zokudlulisela.
Amaphromoshini womuntu siqu, amakhadi esipho, izipho, ukwethembeka, noma izinhlelo zokudlulisela zibaluleke kakhulu ezigabeni zokuqala zokukhula.
Abaqalayo bavamise ukulwa nokutholwa kwamakhasimende, lapho ukwethula amakhuphoni esaphulelo omuntu siqu, ukukhushulwa kwezinqola noma amakhadi esipho kungabaluleka ekuheheni amakhasimende amasha.
Ngaphezu kuka-79% wabathengi base-US kanye nama-70% wabathengi base-UK balindele futhi bayakwazisa ukuphathwa komuntu ngamunye okuza nokuzizwisa okuklanywe kahle kwe-e-commerce.
Njengoba isizinda samakhasimende esiqalayo ngokuvamile siphansi, ukuthengisa kuyingxenye ebalulekile yesu. Ukwethula amaphromoshini enqola nezinqwaba zomkhiqizo kungasiza ekuthengiseni kakhulu.
Izinhlelo zokudlulisela zibalulekile ukuze kuphume igama futhi kungaba injini yokukhula yokuqala ngomkhiqizo omuhle kodwa ongabonakali kahle (OVO Amandla, isibonelo, usebenzise leli qhinga ukuze ungene emakethe entsha).
Ukumaketha okudluliswayo kukhiqiza amazinga okuguqulwa aphindwe izikhathi ezi-3 kuye kwezingu-5 kunanoma isiphi esinye isiteshi sokumaketha. Amakhasimende angu-92% ayasithemba iseluleko sabangane bawo futhi amakhasimende angu-77% azimisele ukuthenga umkhiqizo noma ukusebenzisa amasevisi anconywe othile amaziyo.
Nielsen: Thembela Kwezokukhangisa
Lona umthombo obalulekile wamakhasimende amasha, ikakhulukazi amabhizinisi e-niche.
Uhlelo lokwethembeka lungase lubonakale luyimali eningi enkampanini eqalayo kodwa ngaphandle kweyodwa, bazifaka engozini yokulahlekelwa amakhasimende abafaka umzamo omkhulu kanye nemali ukuze bathole. Ngaphezu kwalokho, ngisho nokwenyuka okungu-5% kokugcinwa kungaholela kokuningi 25-95% ukwanda kwenzuzo.
I-Voucherify isanda kwethula a uhlelo lokubhalisa lwamahhala. Leli yithuba elihle labaqalayo nama-SME ukuthi baqalise amaphromoshini azenzakalelayo, aqondene nawe futhi athuthukise ukutholwa kwamakhasimende nokugcinwa mahhala, ngokutshalwa kwezimali okuncane kwesikhathi sikanjiniyela. Uhlelo lwamahhala luhlanganisa zonke izici (ngaphandle kwe-geofencing) nezinhlobo zomkhankaso, okuhlanganisa ukunyuswa komuntu siqu, amakhadi esipho, ama-sweepstake, ukudluliselwa, nemikhankaso yokwethembeka.
Sijabule kakhulu ngokuqala ukunikeza uhlelo lwamahhala lokubhalisa. Sikholelwa ukuthi kuzosiza abaningi abasafufusa kanye nama-SMBE ukuthi baqale ukukhula futhi siyajabula ukuba yingxenye yakho. I-Voucherify yakhiwe onjiniyela, yonjiniyela futhi sijabule ukuhlinzeka ngobuchwepheshe besimanje kubo bonke osayizi bamabhizinisi, ngentengo efinyelelekayo kubo.
UTom Pindel, oyi-CEO yeVoucherify
Uhlelo Lokwenza Ivawusha Yamahhala Luhlanganisa Okulandelayo
Inani elingenamkhawulo lemikhankaso.
Amakholi we-API angu-100/ihora.
1000 API amakholi/ngenyanga.
Ukwesekwa komphakathi okuxegayo.
Ukuzisebenzela wena nokuqeqeshwa komsebenzisi.
Isibonelo esisodwa sokuqalisa okukhule kusetshenziswa i-Voucherify ngu bonke. I-Tutti iyisiqalo esizinze e-UK esinikeza inkundla yabantu abanobuhlakani lapho bengaqasha khona izikhala zanoma yisiphi isidingo sobuciko, kungakhathaliseki ukuthi ukuzilolonga, ukuhlola, ukuthwebula izithombe, ukuthwebula ifilimu, ukusakaza bukhoma, noma okunye. U-Tutti wayefuna ukwethula izinhlelo zokudlulisela kanye nemikhankaso yokuthuthukisa ukutholwa kwabo futhi wayedinga isisombululo sesofthiwe esingaba yi-API-kuqala futhi silingane nezakhiwo zabo zamanje ezisekelwe kuma-microservices esebenzisa amapulatifomu ahlukahlukene asekelwe ku-API, njenge I-Stripe, Ingxenye, I-ActiveCampaign.
Bakhethe ukuhamba neVoucherify. Bahlole abanye abahlinzeki besofthiwe ye-API yokuqala kodwa babe nezintengo eziphakeme kakhulu kune-Voucherify noma abazange banikeze zonke izimo zokuphromotha kuphakheji eyisisekelo. Ukuhlanganiswa ne-Voucherify kuthathe izinsuku eziyisikhombisa ku-Tutti, enonjiniyela ababili be-software, abalwe kusukela ekuqaleni komsebenzi wokuhlanganisa kuze kuqaliswe umkhankaso wokuqala. Ngenxa ye-Voucherify, isithakazelo ekunikezeni kwabo kwanda futhi ithimba labo lakwazi ukuthola udumo ngokunikeza izaphulelo kuzinhlangano ezisiza abampofu nama-incubator okuqala.
I-Voucherify Tutti Case Study
Ungathola ukuqhathanisa okuningiliziwe kwezinhlelo zokubhalisa kanye nemikhawulo yazo ku-Voucherify ikhasi lamanani.
Qinisekisa isofthiwe yephromoshini ye-API-centric kanye nokuphathwa kokwethembeka ehlinzeka ngokukhuthaza komuntu siqu. I-Voucherify iklanyelwe ukunika amandla amaqembu okukhangisa ukuthi aqalise ngokushesha futhi aphathe ngempumelelo ikhuphoni elingokomongo nelomuntu siqu kanye namaphromoshini wekhadi lesipho, izipho, ukudlulisela, nezinhlelo zokwethembeka. Ngenxa ye-API yokuqala, eyakhiwe engenakhanda kanye nokuhlanganiswa okuningi okuphuma ebhokisini, i-Voucherify ingahlanganiswa phakathi nezinsuku, ifinyeze kakhulu isikhathi sokuya emakethe futhi inciphise izindleko zentuthuko.
Amabhulokhi wokwakha ahlelekayo asiza ukuhlanganisa izikhuthazo kunoma yisiphi isiteshi, noma iyiphi idivayisi, nanoma yisiphi isisombululo se-e-commerce. Ideshibhodi elungele ukumaketha lapho ithimba lokumaketha lingaqalisa khona, libuyekeze noma lihlaziye yonke imikhankaso yokuphromotha isusa umthwalo eqenjini lokuthuthukisa. I-Voucherify inikeza injini yemithetho eguquguqukayo yokuthuthukisa ukuguqulwa kwakho namazinga okugcina ngaphandle kokushisa ibhajethi yephromoshini.
I-Voucherify ivumela izinkampani zabo bonke osayizi ukuthi zithuthukise ukutholwa kwazo, ukugcinwa, namazinga okuguqulwa njengoba kwenza iziqhwaga ze-e-commerce, ngengxenye yezindleko. Kusukela namuhla, iVoucherify isizuze ukwethenjwa amakhasimende angaphezu kuka-300 (phakathi kwawo uClorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy, noma Bloomberg) futhi isebenzela izigidi zabathengi ngezinkulungwane zemikhankaso yokukhangisa imbulunga.
Zama i-Voucherify Mahhala
Ukudalula: Martech Zone ufake izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: i-agileoneukukhushulwa okuzenzakalelayoamakhuphoni esaphuleloukukhushulwa kwamahhalaAmakhadi wesiphoUhlelo lokwethembeka apiizinhlelo zokwethembekaNielsenukukhushulwa apiizinhlelo zokudluliselaingxenyeamaswiditom pindelqinisekisa
Imenenja yezentengiso yedijithali nomphathi womkhiqizo. Unentshisekelo ekuphathweni komkhiqizo wedijithali nokumaketha - konke kusuka kumatayela wokwakha isoftware, amasu wokuphatha amaphrojekthi, izitayela ze-UX kuya kumasu wokumaketha.
I-ZoomInfo: Sheshisa Ipayipi Lakho le-B2B Ngedatha Yenkampani Njengesevisi (DaaS)